Qorshihii Dhismaha Xarunta FBI oo laga Tanaasulay
Hay’adda dowladda Mareykanka u qaabilsan maareynta dhismayaasha federal-ka, ayaa lagu wadaa inay maanta ku dhawaaqdo inay ka tanaasushay qorshe muddo ka badan 10 sano socday oo xarun cusub loogu dhisayo hay’adda dambi-baarista ee FBI.
Tallaabadan ayaa imaneysa saddex sano kadib markii Maamulka Adeega Guud uu go’aan ku gaaray saddex goob oo ku yaalla duleedka Washington midkood laga dhiso xarunta cusub, oo qaadi karta dhammaan 11,000 ee shaqaalaha FBI-da ee xarunta iminka ee Washington DC.
Kaliya nus ka mid ah shaqaalahaas ayaa iminka ka howl-gala xarunta J. Edgar Hoover ee waddada Pennsylvania Avenue, halka inta soo hartay ay ku kala fidsan yihiin xarumo kala duwan, taasi oo qarash badan uu ku baxo.
Xarunta FBI-da ee Washington DC ayaa laga qabaa walaacyo dhanka ammaanka ah. Booliiska FBI-da ayaa gaaf-wareega banaanka xarunta, waxaana sidoo kale ku gadaaman dhagxaan waa weyn, hase yeeshee dadka deegaanka iyo kuwa dalxiiska ayaa wood u leh inay albaabka xarunta hormaraan.
Mid ka mid ah ujeedooyinka xarunta cusub loo dhisayey ayaa ahayd in ammaanka sare loo qaado, hase yeeshee qiimaha dhismaha xarunta cusub oo dhan laba bilyan oo dollar, ayaa waxaa aad uga horyimid congress-ka.